April 2018 - Riddle Nepal
santosh Apr 23, 2018 0
तेहथुम — गाई काटेको आरोपमा छथर गाउँपालिका-६ सुदापबाट प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरी चौकी ओख्रेबाट खटीएको प्रहरीले छथर गाउँपालिका-६ का ३० वर्षीय शान्त बहादुर लिम्बू, ३५ वर्षीय प्रेम लिम्बू र उनका छोरा १६ वर्षीय सुमन लिम्बूलाई…
सिरिया हवाई आक्रमण निर्दिष्ट लक्ष्यमा
santosh Apr 15, 2018 0
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सिरियामा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्सले सिरियाली प्रशासन विरुद्ध गरेका सम्पूर्ण आक्रमण लक्षित स्थानमा गर्न सफलता मिलेको दावी गरेको छ । रूसले दर्जनौँ क्षेप्यास्त्रलाई बीचमा अबरोध गरेको तर हवाई आक्रमणका निशाना सही रहेका…
कमल थापाकाे विद्यार्थी संगठनको रास्ट्रीय भेलामा झडप !
santosh Apr 13, 2018 0
काठमाडाै, ३० चैत ।राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन राप्रबिसंको बुधबार उद्घाटन भएको राष्टिय भेलामा विबाद सृजना भएको छ । राष्टिय भेलामा पार्टिका महामन्त्री राजेन्द्र लिंगदेलले हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले…
अनौठो किसिमको जनावर फेला पर्यो तर झुन्डाएर यसरी मारियो
व्हाट्सएप समाचार सेवाको महिमा र फेसबुक मिडिया निकै ठूलो छ। यहाँ तपाईंको फोटो यति धेरै ढाँचामा देखिन्छ जुन तपाईंले आफ्नो साँचो पहिचान बिर्सनु भएको छ। यहाँ बजारमा नयाँ कुरा आयो। त्यहाँ एउटा तस्बिर हो। तस्विरमा कुनै डरलाग्दो प्राणी मरेको छैन।…
अमेरिकाको क्षेप्यास्त्र रोक्न सिरियामा रसियाको शक्तिशाली एस–४०० प्रतिरक्षा प्रणाली तैनाथ, जान्नुहोस्…
santosh Apr 12, 2018 0
काठमाडौँ । अमेरिकाले आगामी ७२ घण्टा भित्र सिरियामा क्षेप्यास्त्र हान्ने चेतावनी दिएको छ । यसको प्रतिक्रिया दिँदै सिरियाको मुख्य मित्रशक्ति रसियाले अमेरिकाले हानेको हरेक क्षेप्यास्त्र खसालिदिने दाबी गरेको छ । सिरियाली द्वन्द्वमा रुसी सेना…
यौन दुव्र्यवहारबारे मोडल र हिरोइनका खबर त ‘ओपन सेक्रेट’ नै भइसक्यो तर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ– संगीतकारबाटै यौन शोषण र दुव्र्यवहारमा पर्ने गायिकाको संख्या पनि कम छैन । बाहिरबाट हेर्दा संगीत जगत् जति सुरिलो लाग्छ, यसको अँध्यारो पाटो त्यति नै…
किम कार्दशियन बनाउन खोज्दा गर्लफ्रेण्डको भयो यो हालत (फोटो फिचर)
एजेन्सी । भनिन्छ प्रेम र युद्धमा सबचिज जायज छ । आफ्नो प्रेमी प्रमिकालाई खुसी बनाउन मानिसहरु जे पनि गर्न तयार हुन्छन् । यसकै एउटा गतिलो उदाहरण बनेकी छिन् २५ वर्षीया ब्राजिलियन युवती जेनिफर पेम्पलोना । जेनिफरको अनुहार केही हदसम्म हलिउड स्टार…
हराएको ११ वर्षपछि कनकमणिको गुठीमा भेटियो बेनी आक्रमणको युद्धपोल
काठमाडौं । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारी सेनाबीच बेनी भीडन्तको प्रमाणका रुपमा रहेको युद्धपोल पाटन ढोकास्थित मदन पुस्तकालय गुठीको हाताभित्र यालमाया केन्द्रमा फेला परेको छ । गुठीका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित हुन् । २०६० चैत ७ गते तात्कालीन…
राजा ज्ञानेन्द्रले खुमबहादुर खड्कालाई फसाए : शेरबहादुर देउवा
सतवरिया, २९ चैत / नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वर्गीय नेता खुमबहादुर खड्कालाई राजा ज्ञानेन्द्रले मुद्दा लगाएर फसाएको बताएका छन् । बुधवार स्वर्गीय नेताको गृह जिल्ला दाङको लमही नगरपालिका वडा नं. ८ गोझेनास्थित खड्काको निवासमा…
काठमाडौं, चैत्र २९ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरणका लागि बनेका कार्यदलले तयार पारेका दस्तावेजहरू भारतीय राजदूतावासमा पुगेको छ । भारतीय दूतावास लैनचौरमा दुईवटा दस्तावेजहरू पुगेपछि वाम गठबन्धनभित्र बबण्डर भएको स्रोतले बतायो…